छाडा र माताका पछि युट्युबका दर्शक
पहिले–पहिले ‘भाइरल’ भन्ने शब्द रोगसँग सम्बन्धित थियो। ‘भाइरल ज्वरो’, ‘भाइरल इन्फ्लुएन्जा’, ‘भाइरल इन्फेक्सन’ आदि। भाइरस अर्थात् विषाणुसँग सम्बन्धित वा विषाणुका कारण हुने कुनै रोग वा समस्यासँग भाइरल शब्द जोडिन्थ्यो। अहिले भाइरल भन्नासाथ इन्टरनेटमा धेरैले हेरेका, साझा गरेका तस्बिर, भिडियोलगायत सामग्री भन्ने बुझिन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा अचेल अर्थ न बर्थका जे–जे चिज भाइरल भइरहेका छन्, ती जसरी भाइरल भइरहेका छन्, तिनलाई हेर्दा प्रश्न गर्न सकिन्छ– इन्टरनेटका थुप्रै भाइरल सामग्री रोगजस्ता हानिकारक छन् कि छैनन् ?
अघोर बाबाको हावादारी गफ
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छन्, एक जना बाबा। आफूलाई ‘महामृत्युञ्जय अघोर बाबा’का नामले चिनाउने गरेका छन्। युट्युबमा ‘बाबा’ मात्रै लेखेर सर्च गर्दा पनि उनका अनगिन्ती भिडियो भेटिन्छन्। काठमाडौँ, सुन्दरीजलमा बस्ने उनी आफूले २० वर्षको उमेरमै ‘दिव्य सिद्धि ज्ञान’ प्राप्त गरेको दाबी गर्छन्। उनका अन्तर्वार्ता युट्युबमा यत्रतत्र भेटिन्छन्।
यी भाइरल बाबा धेरै विषयमा ‘ज्ञान’ राख्छन्। देशको विकास, ग्रह–उपग्रहका कुरा, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, अर्थतन्त्र, शासन आदि विषयमा उनका अन्तर्वार्ता प्रसारित छन्। एउटा भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘मर्न लागेको मान्छेलाई म मन्त्र पढेर केही समयका लागि जीवित राख्दिन सक्छु।’ हावादारी गफको पराकाष्ठा नाघ्दै उनी भन्छन्, ‘मेरो किचकन्यासँग प्रेम छ।’
कुनै विषयले चर्चा पाउनेबित्तिकै युट्युबरहरू उनीकहाँ पुग्छन्, अन्तर्वार्ता लिन्छन्, भिडियो बनाउँछन् र युट्युबमा अपलोड गर्छन्। पछिल्लो समयमा ‘भूकम्प आउँछ’ भन्दै हल्ला फिँजाउने अर्जुन क्षेत्रीका बारेमा पनि बाबालाई थुप्रै युुट्युबरहरूले सोधेका थिए। जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘अर्जुन क्षत्री पागल हो, ज्योतिषी होइन।’ सोधिएका प्रत्येक प्रश्नमा उनी ‘पूर्ण विश्वस्त’ भएर जवाफ दिइरहेका भेटिन्छन्।
उनका भिडियोमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा उनलाई धेरैले रुचाएको देखिन्छ। उनका प्रत्येक भिडियो अन्तर्वार्तामा लाखौँ भ्युज र हजाराँै कमेन्ट हुन्छन्। भिडियोको प्रतिक्रियामा प्रायः दर्शकले उनको कुरामा सहमति जनाएका छन्। सीता थापा नाम गरेकी एक जना युट्युब प्रयोगकर्ता कमेन्ट गर्छिन्, ‘यी बाबाजी नेपालको प्रधानमन्त्री भएको भए बरु धेरै विकास हुन्थ्यो। बाबाले एकदमै सही कुरा गरेका छन्।’ अर्का युट्युब प्रयोगकर्ता खिम श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘राम्रो छ बाबाजी ! तपाईं साह्रै बुद्धिजीवी हुनुहुँदो रहेछ।’ उनको समर्थन गर्ने मात्र होइन, युट्युबमा त्यस्ता धेरै मानिस भेटिन्छन्, जो बाबालाई प्रेरणाको स्रोत मान्छन्। अभिषेक न्यौपाने युट्युबमा लेख्छन्, ‘बाबाजी मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँजस्तो बुद्धिजीवी र जान्ने मान्छे नेपालमा कोही छैन।’
भूकम्पको हल्लाखोर ज्योतिषी
‘युट्युबमा भूकम्पको भविष्यवाणीबारे सुनेर घरबाटै निस्किन डर लागेको थियो, तर ज्योतिषीलाई त पुलिसले समातेछ,’ काठमाडौँ, अनामनगरस्थित एक क्याफेमा दाङ घर भएका रामकुमार क्षत्री आफ्ना साथीभाइसँग गफिँदै थिए। क्याफेमा अर्जुन क्षत्रीको चर्चा भइरहेको थियो। उनी केही समयअघि भूूकम्पको हल्ला फैलाएको कारण रातारात चर्चामा आए र पुलिसको खोरमा पुगेर सेलाए।
‘जेठ १७ देखि जेठ २८ सम्म ठूलो खतरा छ,’ युट्युबको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘लेखेर राख्नुस्, भूकम्प जान्छ। अर्जुन क्षत्रीले भनेको कुरा हो, जसरी पनि भूकम्प जान्छ। सरकारले मलाई पक्रिएर लगे पनि लैजाओस्। तर, जेठदेखि असोजसम्म जसरी पनि सात रेक्टरको भूकम्प जान्छ।’ उनले यति भनेपछि भूकम्पको भविष्यवाणीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर थुप्रै युट्युब च्यानलमा उनका अन्तर्वार्ता हालियो। केही समय उनलाई चर्चित बनाइयो।
उनको भिडियोका कारण काठमाडौँ, गौशालामा डेरा गरी बस्ने पवित्रा आचार्य जेठ २८ गते आफ्ना दुई छोरालाई लिएर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको कैलाश डाँडा पुगिन्। ‘भुइँचालो आयो भने बच्न सकिन्छ भनेर यहाँ आएकी हुँ,’ उनले भनिन्।
‘म विश्वकै एक मात्र ‘फेस रिडर’ हुँ’ भन्दै अर्जुनले आफूलाई युट्युबका भिडियोमा चिनाउने गरेका छन्। ‘म संसारकै एक मात्र अनुहार पढेर भविष्य बताउन सक्ने ज्योतिषी हुँ,’ एक भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘संसारमा मजस्तो प्रतिभाशाली र फरक खालको ज्योतिषी कोही पनि छैन।’ केही महिनायता आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाट ‘फेस रिडिङ’ को कार्यक्रम चलाउँदै आएका अर्जुन भूकम्प आउँछ भन्ने भविष्यवाणीपछि निकै चर्चित भएका थिए। त्यसपछि युट्युबमा उनका अन्तर्वार्ताको ओइरो लाग्न थाल्यो। ‘‘निर्मला हत्याकाण्ड’को हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्‍यो’ देखि ‘नेपालमा राजतन्त्र फर्किएर आउँछ कि आउँदैन’ जस्ता प्रश्न गर्ने युट्युबरहरूबाट उनी घेरिन थाले।
एक युट्युब च्यानलसँग कुरा गर्दै अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘नासा’ले उनलाई बोलाएको गफ दिए। ‘मलाई नासाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च सेन्टरले बोलाउँदा पनि गइनँ,’ उनले भनेको छन्, ‘महिनाको एक लाख डलर दिन्छु भन्दा पनि मैले उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ। म त्यस्तो जान्ने मान्छे हुँ। मैले गरेका सबै भविष्यवाणी पूरा हुन्छ।’ यसका साथै उनले आफूसँग तीन वटा मोबाइल भएको र हरेक दिन आठ हजारभन्दा बढी कल आउने भन्दै गफ दिँदै आएका थिए।
‘भूकम्प आउँछ’ भन्दै जनतामा क्रास फैलाएको कसुरमा उनलाई प्रहरीले जेठ २१ गते गिरफ्तार गरेको थियो। गिरफ्तारीपछि पनि उनी युट्युबमा निरन्तर छाइरहे। ‘ज्योतिषी अर्जुन क्षत्रीलाई यसरी गरियो गिरफ्तार’, ‘झुट बोल्ने ज्योतिषीको पर्दाफास’, ‘नेपालका चर्चित ज्योतिषीले गरे अर्जुन क्षत्रीको झुटको पर्दाफास’, लगायत हेडलाइन राखेर प्रसारण गरिएका भिडियोहरू युट्युबमा अझै पनि टे«न्डिङमा छन्।
लाखौँ भ्युज भएका उनका भिडियोमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आउँछन्। उनले भूकम्पबारे गरेको भविष्यवाणीमा गौरंग पोखरेल नामक युट्युब प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘समय पर्खिएर हेर्नुहोस्, उहाँको भविष्यवाणी सत्य हुन सक्छ।’ उनी पक्राउ परेपछि भने नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरू ज्यादा भेटिए। सेन्चेलुङ चेम्जोङ लेख्छन्, ‘साथीभाइ हो, यो नेपाली युट्युबरहरूलाई हेर त ! यस्तो ज्योतिषीका अगाडि तँछाडमछाड गर्दै माइक्रोफोन तेस्र्याएका।’
जसको ओठ फुट्दा ‘देशमा रक्तपात हुन्छ’
युट्युबमा ‘कलियुगकी मोडर्न माता’को परिचय बनाएकी छिन्, सविता आर्चायले। उनका थुुप्रै अन्तर्वार्ता भेटिन्छन्। फोटो हेरेर, अनुहार पढेर तथा आवाज सुनेर भविष्यवाणी गर्न सक्ने ‘अलौकिक’ शक्ति आफूसँग भएको उनले हरेक भिडियोमा बताउँदै आएकी छिन्। ‘स्मार्ट टीभी’ नामक एक युट्युब च्यानलमा उनले दिएको अन्तर्वार्तालाई १० लाखभन्दा बढीले हेरेका छन्। अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘आजसम्म मैले ३६ लाखभन्दा धेरै मान्छेको भविष्यवाणी गरेकी छु। मैले गरेका भविष्यवाणी आजसम्म गलत भएको छैन। २०८२ सालसम्ममा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ।’ आफ्नो ओठ फुट्दा देशमा रक्तपात हुने उनको हास्यास्पद गफले पनि हजारौँ लाइक पाएका छन्। उनी भन्छिन्, ‘मेरो ओठ फुटेर रगत आएको बेला देशमा पनि रक्तपात भएको छ। त्यसैले मैले गरेको भविष्यवाणी गलत हुँदैन।’
हाल यूएई, दुबई बस्ने मोडर्न माता भनिएकी सविता धनकुटाकी हुन्। ‘सात वर्षको हुँदा बाटै मैले मेरो शक्ति थाहा पाएँ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘त्यसपछि मैले भविष्यवाणी गर्न थालेकी हुँ।’ युट्युबमा उनलाई अन्तर्वार्ता लिनेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको भेटिन्छ। उनका अधिकांश भविष्यवाणी नेपालको राजनीतिमाथि हुने गर्छ। ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि होइन, यो छाडातन्त्र हो,’ उनले भनेकी छिन्, ‘देश बचाउने हो भने राजा आउन आवश्यक छ। राजा केही वर्षमा अवश्य आउँछन्।’ प्राइम टेलिभिजनमा उनले दिएको अन्तर्वार्तामा उनले २०७६ फागुनमा राजा फर्किने बताएकी छिन्। ‘राजतन्त्र यही साल फागुनमा फर्किन्छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘नेपालमा यो वर्ष निकै अनिष्ट हुँदै छ। पाँच लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने पक्का छ।’
उनका भविष्यवाणीका भिडियो अत्यधिक रुचाइएका छन्। युट्युब प्रयोगकर्ता अर्जुन थापा उनको भिडियोमा प्रतिक्रिया दिँदै लेख्छन्, ‘माताले गरेका सबै भविष्यवाणी सही भएका छन्। २०७२ सालमा भूकम्प आउने कुरा पनि उहाँले अगाडि नै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। प्लेन दुर्घटनाको कुरा पनि सत्य साबित भयो। नेपालीहरूलाई उहाँले सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँको कुरामा सत्यता छ।’ उनका कुरामा विश्वास नगर्नेहरू भने थोरै मात्रामा छन्। युट्युब प्रयोगकर्ता रुद्र हरि उनको भिडियोमा कमेन्ट गर्छन्, ‘यस्ता बकम्फुसे कुरा सर्वसाधारणले पनि सोच्न सक्छन्। वाहियात कुरा गरेर माता भइँदैन।’
ईश्वरले धर्तीमा पठाएका ‘धर्ती माता’
भविष्यवाणी गर्ने अर्की माता हुन्, विष्णु कुँवर। युट्युबमा ‘धर्ती माता’ का नामले चर्चित छिन् उनी। उनी हरेक किसिमका रोगको उपचार गर्न सक्ने बताउँछिन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘मेरोमा उपचार गर्न र सल्लाह लिन दिनमा कति मान्छे आउँछन्, गनेर साध्य छैन।’ हरेक किसिमका स्वास्थ्य समस्या लिएर मानिसहरू आफूलाई भेट्न आउने उनले बताएकी छिन्। भन्छिन्, ‘मेरोमा आएपछि भगवान्को कृपाले उनीहरूको उपचार सफल भएको छ।’ आफ्नोमा आउनेले उनको बारेमा नराम्रो सोच राखेमा उनीहरूको नाश हुने गरेको विष्णु बताउँछिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘मेरोमा आउँदा मप्रति गलत सोच राखेमा यहाँ भएको तरबारले लागेर उनीहरूको नाश हुन सक्छ। त्यसैले मप्रति नकारात्मक सोच राख्नेको भलो हुँदैन।’
थुप्रै युट्युबरले उनको अन्तर्वार्ता लिँदै भिडियोमा ‘धर्ती माताले गरिन् यस्तो उपचार’, ‘धर्ती माताले यसरी फुकिन् मन्त्र’, ‘धर्ती माताले गरिन् यस्तो खुलासा’ लगायत शीर्षक प्रयोग गरेका भेटिन्छन्। इन्साइडर मिडिया नामक युट्युब च्यालनमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘मलाई कहिले के हुन्छ भनेर सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर, म कसैलाई पनि यस्ता कुरा भन्दिनँ।’ उक्त भिडियोमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेका अर्जुन क्षत्रीलाई लिएर गरिएको प्रश्नमा उनले भनेकी छिन्, ‘अर्काले भनेको कुरा पत्याउने सबै नेपाली मूर्ख हुन्। २०७२ सालमा भूकम्प आउने कुरा मलाई थाहा थियो। मैले सबै कुरा थाहा पाएर पनि भनिनँ। अहिले पनि भूकम्प आउँदैन भन्ने ध्यान गरेर मैले थाहा पाइसकेकी थिएँ। तर, कसैलाई भनिनँ।’
ईश्वरले कलियुगमा सत्यको मार्गमा अगाडि बढ्न आफूलाई सीताका रूपमा पठाएको उनको दाबी छ। ‘वास्तवमा म सत्यतथ्य दिन यो जगत्मा सत्यमाता सीता र कलिमाता महालक्ष्मीका रूपमा आएकी हुँ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘संसारलाई माया र कर्म दिएर आऊ भनेर ईश्वरले मलाई पठाउनुभएको हो।’
उनका भिडियोहरू अपलोड हुनासाथ युट्युब ट्रेन्डिङमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता भिडियोमा भएका कुराकानीलाई विश्वास गर्दै प्रतिक्रिया दिनेहरूको पनि उस्तै लर्को छ। उनलाई विश्वास गरेर सहान तामाङ कमेन्ट गर्छन्, ‘माताजी, अब भूकम्प कहिले आउँछ भन्दिनुपर्‍यो।’ त्यस्तै, आर्यन मगर पनि सोध्छन्, ‘माताजी, नेपालको गरिबी कहिले हट्छ ? अनि, बेसहारा र लाचार मान्छेको दिन कहिले आउँछ ?’
लीलाराजको युट्युब लीला
लीलाराज खतिवडाका अन्तर्वार्ता युट्युबमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। ‘युवा मन नेपाल’ नाम गरेको युट्युब च्यानलले लिएको उनको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘नेपाल विदेशी एजेन्सीहरूको प्रयोगशाला हो। यहाँ प्रधानमन्त्री फेर्नेदेखि कसलाई कहाँ पुर्‍याउने, सबै विदेशीको हातमा छ।’ पछिल्लो समय भएको पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटना तथा मृत्युलाई उनले दुर्घटना नभएर योजनाबद्ध रूपमा भएको हत्या भनेका छन्। ‘अस्ति भर्खर भएको हेलिकप्टर दुर्घटना तलबाट तारो हानेर खसालिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, प्रहरी, सोधपुछ गर्ने कसैले पनि यसरी सोचेन। नेपालका हरेक ठाउँमा अहिले पाकिस्तानी एजेन्टहरू छन्। उनीहरू आधुनिक हतियारसहित यहाँ ट्रेनिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले नै तारो हानेर हेलिकप्टर खसालेका हुन्।’
राजनीतिसँगै अर्थतन्त्र, समाज, योग, दर्शनलगायत विषयमा उनले बोल्ने गरेका छन्। उनले गाँजाको विषयमा दिएको अन्तर्वार्ता पनि निकैले हेरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हरेकको घरमा तुलसीको सट्टा गाँजा रोप्नुपर्छ। नेपालको विकासको लागि पनि हरेक घरमा गाँजाको बोट हुनु आवश्यक छ।’
उनलाई समर्थन गरेर प्रतिक्रिया दिनेको लाम छ, युट्युबमा। सुसन केसी नाम गरेका युट्युब प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘यस्तो बौद्धिक मान्छे, बौद्धिक पत्रकारलाई साथ र सहयोगको खाँचो छ। सबैले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ।’ लीलाराजका अन्तर्वार्ता सुनेर आफूलाई प्रेरणा मिलेको भन्नेहरूको पनि कमी छैन। कोमल सुब्बा लेख्छन्, ‘लीलाराजजी, तपाईंको अन्तर्वार्तामा शतप्रतिशत दम छ। तपाईंको कुरामा सत्यता छ। तपाईंजस्तो बौद्धिक मान्छे नेपालमा भएकाले अब देशले काँचुली फेर्छ। तपार्इं मेरो प्रेरणाको स्रोत हो।’
भगवान्सँग सर–सल्लाह गर्ने सुन्दरी माता
माताका रूपमा युट्युबमा चर्चितमध्ये एक हुन्, रोजना खड्का। ‘१६ वर्षकी सुन्दरी माता’ को उपमा दिएर उनको अन्तार्वार्ता लिनेहरूको युट्युबमा घुइँचो छ। दाङ, तुलसीपुरकी यी किशोरी हाल ११ कक्षामा अध्ययनरत छिन्। युट्युब च्यानलहरूका अनुसार उनका लागि भनेर ‘माताको मन्दिर’ नामक छुुट्टै मन्दिर पनि बनेको छ। आफूले १४ वर्षको उमेरबाट ‘माता’को रूप लिएको उनी बताउँछिन्। भिडियोमा उनले भनेकी छिन्, ‘म भूत, वर्तमान र भविष्यबारे भविष्यवाणी गर्छु। मान्छेको भविष्य फिल्म हेरेको जस्तै प्रष्टै देख्छु।’ रमाइलो कुरा के छ भने भूत वा विगतको पनि यिनले भविष्यवाणी गर्ने गरेकी छिन् !
केही समयअघि तुलसीपुरको खाद्रेमा नागलाई बोलाएको भन्दै युट्युबमा भिडियोहरू सार्वजनिक भए। सो घटनापछि उनको चर्चा हुन थाल्यो। ‘नाग भएको ठाउँमा अरूले जुठो गरेर नाग आएनन्, अन्तार्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘तर, मैले बोलाएपछि नागले दर्शन दिनुभयो।’ आफूले भगवान्सँग कुरा गर्ने गरेको उनले बताउँदै आएकी छिन्। अन्तार्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘मैले केही गर्नुअगाडि भगवान्सँग सर–सल्लाह लिने गरेकी छु।’
‘वल्र्डवाइड नेपाल’ नामक युट्युब च्यानलमा प्रसारित सुन्दरी माताको भिडियो हेरेपछि अप्सरा पोखरेल लेख्छिन्, ‘म तीन हप्तादेखि बिरामी छु। माताले राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँ देउता नै होजस्तो लाग्यो। म मातासँग आफ्नो भविष्य हेराउन चाहन्छु।’ त्यस्तै, युट्युब प्रयोगकर्ता वासुदेव पोखरेल लेख्छन्, ‘मलाई उहाँमाथि ठूलो विश्वास छ। माता हजुरको कल्याण होस्, हजुरलाई अझै शक्ति मिलोस्।’
हाँसोउठ्दो अंग्रेजीले भाइरल भवानी
आजभोलि युट्युबको टेन्डिङमा भवानी थापाका पनि धेरै भिडियो पर्ने गरेका छन्। उनको नाम कतै भवानी प्याकुरेल छ, कतै भवानी थापा। उनले गीत गाएको, हँसी–मजाक गरेका भिडियोमा लाखौँ भ्यूज हुन्छन्। भिडियोअनुसार उनका विषयवस्तु फरक–फरक हुन्छन्। भिडियो खिच्नुअघि ‘भिडियो खिचेबापत यति पैसा दिउँला’ भनेको पनि प्रष्टै सुनिन्छ केही भिडियोमा। ‘स्मार्ट टीभी’ नामक युट्युब च्यानलले लिएको एक अन्तार्वार्ताको सुरुवातमा अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारले उनलाई पैसा दिने भनेको कुरा प्रष्टै सुनिन्छ। अन्तर्वार्ताको सुरुमा उनले भनेकी छिन्, ‘मलाई रक्सी खान मन लाग्यो। रक्सी खाने पैसा दिन्छौ ? मःमः र ससेज पनि खान्छु।’
फिल्मको डायलग बोल्ने, गीत गाउनेदेखि रुने–हाँस्नेसम्मका उनका हर्कत युट्युबमा निकै रुचाइएका छन्। हरेक भिडियोमा फरक–फरक साथीसँग देखिने उनी आफ्ना छोराछोरी र परिवार भएको बताउँछिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘मेरो मानसिक अवस्था कमजोर छ। श्रीमान्ले रक्सी खाएर पिट्थ्यो। दुःख पाएर यस्ती भएकी हुँ।’ युट्युबरहरूले उनलाई अनेक गतिविधि गर्न लगाइरहेका भेटिन्छन्। हाँसोउठ्दो शैलीमा अंग्रजी बोलेर भाइरल भएकी भवानीका दर्जनौँ भिडियो टे«न्डिङमा छन्।
उनका लागि सहयोगको अपिल गर्दै भिडियो बनाउनेको पनि कमी छैन। लाखौँ भ्युज भएका भिडियोका प्रतिक्रियामा उनलाई सहयोग गर्नेदेखि घर बनाइदिन्छौँ भन्नेसम्मका टिप्पणी छन्। एउटा भिडियोमा कमेन्ट गर्दै विनोद राना लेख्छन्, ‘बिचरा भवानी दिदी, बरु मैले दुःख पाऊँ, यी दिदीको सुखको दिन आओस्।’
सोनिकाको उत्ताउलो हाउभाउ
युट्युबमा कार्यक्रम चलाएकै कारण भाइरल छिन्, सोनिका रोकाया। ‘वाउ नेपाल’ कार्यक्रमबाट चर्चित भएकी उनले अहिले ‘द सोनिका सो’ नामको युट्युब च्यालन सुरु गरेकी छिन्। उनले म्युजिक भिडियोेमा अभिनय पनि गरेकी छिन्। तर, म्युजिक भिडियोभन्दा युट्युबमा उनले लिएका अन्तर्वार्ता निकै चर्चित हुन्छन्।
कार्यक्रममा अश्लील तथा दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराकानी गर्ने उनी भाइरल भइरहन्छिन्। उनका भिडियोले लाखौँ भ्युज पाउँछन्। उनले युट्युब सेलिब्रिटीदेखि आम मान्छेसँग लिएका अन्तर्वार्ता अधिकांश यौनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। ‘तपाईं अझै भर्जिन हुनुहुन्छ ?’, ‘कति उमेरमा भर्जिनिटी तोड्नुभयो ?’ जस्ता प्रश्न गरेर उनले अन्तार्वार्ता लिने गरेकी छिन्। त्यसका साथै, केही सेलिब्रिटीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा पनि उनी आफ्नो प्रस्तुतिका कारण चर्चामा छिन्। अन्तर्वार्तामा सोनिकाले अन्तरर्वार्ता दिने मान्छेसँग अनेक भद्दा हर्कत गर्ने गरेकी भेटिन्छिन्।
उनका यस्ता भिडियोमा दर्शकले गरेको टिप्पणी पूर्ण रूपमा अश्लील हुने गरेको पाइन्छ। सोनिकाले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कमेन्ट बढी पाउँछिन्। तथापि, उनका भिडियोले लाखाँै भ्युज पाउने गरेका छन्।
परीदेखि ज्योतिसम्म भाइरल
परी तामाङ युट्युबमा निकै चर्चित छिन्। म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गर्ने परी युट्युुबमा भने आफ्ना अश्लील हर्कत तथा दोहारो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा हुन्छिन्। युट्युबमा उत्तेजना तथा अश्लीलता प्रदर्शन गरेको कारण उनलाई केही समयअगाडि प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो। तर, युट्युबका विभिन्न च्यालनले नियमित रूपमा उनका भिडियो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
‘परी तामाङको हट एन्ड सेक्सी भिडियो’, ‘परी तामाङले अन्तार्वार्तामै यस्तो गरिन्’ लगायत शीर्षक प्रयोग गरेर उनका भिडियो अपलोड हुने गरेका छन्। उनका भिडियो लाखौँले हेर्ने गरेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छिन्, ‘म त भएको सबै कुरा देखाउने हो। नेपालको नम्बर एक सन्नी लियोन बनेर हिँड्ने हो।’ मगन तामाङ उनको भिडियोमा प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘वाउ परी। निकै राम्रो छ। यस्ता भिडियो अझै हाल्नुस् ल।’
तिर्सना बुढाथोकी आफूलाई मोडल र गायिका भनेर चिनाउँछिन्। तर, युट्युबमा भने उनको बेग्लै परिचय छ। उनको हरेक भिडियो सार्वजनिक भएपछि एक पटक त्यसले तहल्का मच्चाउँछ। उनी भिडियोमा छाडा हाउभाउ देखाइरहेकी हुन्छिन् र लाखौँ भ्युज कमाइरहेकी हुन्छिन्। फेसबुक लाइभमा पनि उनी बेला–बेला अश्लील हर्कत गर्दै प्रस्तुत हुन्छिन्।
गायिका ज्योति मगर पनि युट्युबमा बेलाबखत चर्चित हुन्छिन्। उनका भिडियोमा ‘ज्योति मगरले कार्यक्रममै खोलिन् लुगा’, ‘ज्योति मगरको यस्तो हर्कत’, ‘ज्योति मगरले कार्यक्रममा यस्तो गरिन्’ लगायत शीर्षक प्रयोग गरिएका हुन्छन्। लाखौँ भ्युज पाउने उनका भिडियोमा अनेक किसिमका प्रतिक्रिया आउँछन्। उनको भिडियोमा प्रतिक्रिया दिदैँ सचिन सुब्बा युट्युबमा लेख्छन्, ‘जसले जे भने पनि ज्योति मगर मेरो नजरमा राम्री छिन्, इमानदार छिन्।’
‘अर्थहीन सामग्रीको दबदबा छ’ प्रवेश सुवेदी
न्यू मिडिया अध्येता तथा अनलाइन पत्रकार संघका पूर्वअध्यक्ष
सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको विषयमा बहस गर्दा तीन कुरालाई छुटाउनु हुँदैन। पहिलो, ‘कन्टेन्ट प्रोड्युसर’ अर्थात् सामग्री बनाउने मान्छे। दोस्रो, ‘प्लेटफर्म’ अर्थात् प्रसारण हुने माध्यम। र, तेस्रो, ‘युजर÷कन्ज्युमर’ अर्थात् प्रयोगकर्ता। यी तीन तत्त्व एकापसमा सम्बन्धित छन्। राम्रो÷नराम्रो दुवै सामग्री बन्न पनि यिनको मुख्य भूमिका हुन्छ। यी कुरा बीचमा सन्तुलन मिलेन भने अनावश्यक सामग्री बन्न थाल्छन्।
इन्टरनेटअघि हामीसँग परम्परागत सञ्चारका साधन थिए। त्यसमा दक्ष मानिसले काम गर्थे। सम्पादकीय नियमदेखि सामग्रीले समाजलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने चलन थियो। त्यो बेला प्रयोगकर्ता निष्क्रिय हुन्थे। कार्यक्रम निर्माणमा प्रयोगकर्ताको कुनै भूमिका थिएन। त्यो बेला सूचनाका माध्यम पनि खासै थिएनन्। प्रयोगकर्ताले आफ्नो विचारलाई प्रोड्युसरसम्म पुर्‍याउन निकै अप्ठ्यारो थियो। प्रोड्युसरले आफ्नै तालको सामग्री निर्माण गथ्र्यो।
आज समय धेरै बदलिएको छ। इन्टरनेटले समाजलाई खुला बनाइदिएको छ। प्रयोगकर्ता को, प्रोड्युसर को भनेर छुट्याउन नसक्ने भइसक्यो। अहिले जोसुकै प्रोड्युसर हुन सक्छ, जोसुकै कन्ज्युमर। यस्तो अवस्थामा सिर्जना भएका सामग्रीमा गुणस्तर हुँदैन। इन्टरनेट ‘नन–रेस्ट्रिक्टेड’ प्रणाली हो। यसमा कसैलाई पनि रोकतोक छैन। यसले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिवर्तन ल्याएका छन्। नकारात्मक परिवर्तनसँग जुध्ने सामाजिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षहरू हाम्रोमा विकास भइसकेका छैनन्। जसले गर्दा चाहिनेभन्दा नचाहिने कुराहरू भाइरल भइरहेका छन्। खास गरी, युट्युबमा अर्थहीन सामग्रीको दबदबा छ।
हामीकहाँ ‘प्रोमोसनल’, ‘ह्युमरस’ र ‘सेन्सेसनल’ सामग्री बढी भाइरल हुन्छन्। यस्ता सामग्रीले मानिसलाई उत्साहित, उत्तेजित र अचम्भित बनाउँछन्। युट्युबमा चर्चित हुने सामग्री ‘अर्थहीन छन्’ वा ‘अर्थपूर्ण छन्’ भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छ। समाजले कस्तो सामग्री खाजिरहेछ भन्ने बुझ्न कठिन हुन्छ।
हरेक मान्छेसँग हरेक विषयको जानकारी हुँदैन। जसकारण एकदमै हलुका तथा खास अर्थ नराख्ने सामग्रीसँग प्रयोगकर्ताको लगाव बढ्छ। यस्तै सामग्रीले बढी चर्चा पाउँछन्।
अहिले जो–जो भाइरल भइरहेका छन्, उनीहरू सबैको एउटै उद्देश्य भनेको आफूलाई चिनाउनु हो। तर, समाज यो कुरामा कत्तिको जानकार छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समाजका आफ्नै विचार र धारणा छन्। समाजको संरचनाअनुसार नै ‘बाबाजी’, माताजी’, ‘भूकम्प’, ‘सेक्स’ जस्ता कुराहरू भाइरल भएका हुन्। यिनै कुरालाई अमेरिका वा अन्य कुनै युरोपेली देशमा लगेर प्रसारण गर्ने हो भने केही फरक पार्दैन। त्यहाँको समाजको संरचना र सामग्रीको विषय उनीहरूसँग मेल खाँदैन। तर, हाम्रोमा यिनै कुरालाई चासो दिएर हेरिन्छ। त्यसैले पनि युट्युबमा भिडियो बनाउनेले यस्तै कुरा खोजेर प्रसारण गर्छन्।
पछिल्लो समय यौनका विषयलाई लिएर बनाइएका भिडियोहरू भाइरल हुने गरेका छन्। नेपाली समाजमा अझै पनि यौनलाई खुलेर बहसको विषय बनाइएको छैन। समाज संकुचित हुँदा युट्युबदेखि अन्य सामाजिक सञ्जालमा आएका यस्ता भिडियोलाई मान्छेले चासो दिएर हेर्छन्। त्यस्ता सामग्रीले अत्यधिक चर्चा पनि पाउँछन्। यस्ता सामग्री भाइरल हुनुमा प्रोड्युसर मात्र दोषी होइनन्। यसमा समाजको संरचना पनि दोषी छ। मंगल ग्रहमा रकेट लैजाने कुरा हाम्रो समाजमा चल्दैन। तर, कुनै बाबाजी, भूकम्पको भविष्यवाणी, सेक्सजस्ता कुराले तुरुन्तै चर्चा पाउँछन्।
यस्ता भिडियोलाई कम गर्न सरकारी तथा बौद्धिक तवरले लाग्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, रिसर्च सेन्टर र सरकारी पक्षबाट राम्रो सन्देश जाने सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ। राम्रा तथा बौद्धिक सामग्री निर्माण हुँदा ‘भूूकम्प’ र ‘बाबा’जस्ता सामग्रीले ठाउँ पाउँदैनन्। गुणस्तरीय सामग्रीको विकल्पमा केही नपाएपछि प्रयोगकर्ता यस्तै कुरालाई स्विकारेर बस्छन्। युट्युबमा बौद्धिक वर्ग लागेर अर्थपूर्ण सामग्री निर्माण नगरेसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यस्ता सतही विषयवस्तुले ठाउँ पाइरहन्छन्। यस्ता सामग्रीले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढी प्रभाव पार्छन्। अर्काे कुरा, प्रयोगकर्ताले पनि यस्ता सामग्रीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने यस्ता सामग्री बन्दै–बन्दैनन्। तर, कमजोर मिडिया साक्षरताका कारण के महत्त्वपूर्ण हो भनेर प्रयोगकर्ता छुट्याउन सक्दैनन्। अर्कातिर, के सामग्री हेर्ने भन्नलाई त्यसको विकल्पमा पनि केही छैन। हाम्रो समाज राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक रूपमा ‘ट्रान्जिसनल’ समयमा छ। हाम्रोमा यस्ता विषयलाई लिएर नीति–नियम बनिसकेका छैनन्। भएका केही नियम पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। सामाजिक मनोविज्ञानलाई ध्यान दिने हो भने यी कुराले समाजको चित्रण गरिरहेका हुन्छन्।
‘वाहियात भन्ने जान्दाजान्दै पनि हेर्छन्’ सुरेश पौडेल
निर्देशक, एपी वान टेलिभिजन
इन्टरनेटले गर्दा अहिले हरेकलाई सजिलो भएको छ। एउटा क्यामरा भएपछि जसले जेसुकै खिचेर अपलोड गरे पनि हुने भएको छ। युट्युबमा अनावश्यक विषयलाई दोहोरो अर्थ लाग्ने शीर्षक प्रयोग गरेर अपलोड गरिएको पाइन्छ। केही अचम्मलाग्दो कुरा देख्नेबित्तिकै मरिहत्ते गरेर त्यसको पछाडि लाग्ने नेपाली दर्शकको मनोविज्ञान छ। अहिले चर्चामा रहने ‘पोर्नोग्राफी’ होस् वा ‘राजा फर्किने’ कुरा, त्यसलाई दर्शकले अनौठो मानेर हेरेका हुन्। दैनिक जीवनभन्दा केही फरक कुरा पाउनेबित्तिकै त्यसमा मानिसको चासो बढ्छ। कतिपयले ‘वाहियात’ हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि हेर्छन्।
कुनै समय अडियो, भिडियोमा सबैको पहुँच थिएन। कुनै सामग्री खिचेपछि प्रसारण गर्नुअघि सेन्सरसिपको कुरा हुन्थ्यो। समाजलाई यसले असर गर्छ÷गर्दैन विचार गरेर मात्रै प्रसारण गरिन्थ्यो। युट्युबमा अपलोड गर्ने सामग्रीमा त्यस्तो गरिँदैन। समाजलाई यसले कस्तो प्रभाव पुर्‍याउँछ, सोचविचार गरिँदैन। युट्युबको के कुरा, पछिल्लो सयममा केही टेलिभिजन च्यानलले भूकम्प जाने कुरादेखि ‘बाबाजीले यसो भने’ भन्नेसम्मका कुरा प्रसारण गरिरहेका छन्। युट्युबसँगै यस्ता अर्थहीन कुरा टेलिभिजनमा पनि उस्तै छ्याप्छ्याप्ती छन्। बौद्धिक सामग्री निर्माण गर्ने मानिसहरू उदासीन भएका कारण यस्ता कुराले ठाउँ पाइरहेका छन्।
युुट्युबमा भाइरल बनाइएका व्यक्तिहरूको मानसिक अवस्था के हो ? उनीहरूको समस्या के हो ? केही नबुझी उनीहरूलाई नानाथरी प्रश्न गर्ने र अन्तर्वार्ता लिनेहरूको होडबाजी चलेको छ।
कुनै भिडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कुनै मान्छे भाइरल भइहाल्छ, युट्युबको ट्रेन्डिङमा आइहाल्छ। यस्ता कुरा अर्थहीन हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी ‘यस्तै हो’ भनेर टारिदिन्छौँ। यसकोे विरोधमा कोही जाँदैनौँ। यस्ता भिडियोलाई एकबाट अर्को व्यक्तिमा सेयर गर्दै गाउँदेखि शहरसम्म पुर्‍याएर भाइरल बनाउने काम भइरहेको छ। यस्ता भिडियो हेर्नेदेखि बनाउनेसम्मको चेतनामा परिवर्तन नआएसम्म यो क्रम चलि नै रहन्छ।
युट्युबको प्रयोग गरेर अन्य देशले राम्रा काम गरेका छन्। गृहिणीले खाना बनाउन सिकाउनेदेखि सानो बजेटमा फिल्म बनाउनेसम्मका काम युट्युबमा हिट छन्। तर, नेपालमा भने बढीभन्दा बढी युट्युब च्यालनहरू अर्थहीन कुराहरूको पछि लागेका देखिन्छन्। अहिले हातमा मोबाइल हुनेले भिडियो खिच्छ, युट्युबमा हाल्छ। हेर्नेले न प्रोडक्सन क्वालिटी हेर्छ, न विषयवस्तुको महत्त्व। यस्ता भिडियोका कारण महत्त्वपूर्ण सामग्री ओझेलमा पर्छन्। जानकारीमूलक कुरा युट्युबबाट हराउँछन्। यसको नियन्त्रण सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छ। दर्शक पनि सचेत हुन आवश्यक छ।